Nhau dzekambani-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Mangwanani aNovember 19, Wang Wei'an, mutevedzeri wameya weZhuzhou City, akashanyira kambani iyi kuferefeta ……
Maindasitiri spark plug yekuwedzera tsvimbo zvigadzirwa
Tichifunga nezve chokwadi chekuti vatengi vazhinji vanoda yekuwedzera yekuwedzera tsvimbo kana vachishandisa maindasitiri emoto plug, kambani yedu yakagadzira ichi chigadzirwa uye ine dzakasiyana shanduro dzeindasitiri spark plug. Kana iwe uchida iyo, ndapota nyorera iyo email email yekambani zvakananga.
Takumi auto zvikamu zveboka
Kambani yedu inobata nzvimbo yemamirioni gumi emamirimita. Tine rezinesi rekutengesa kunze kwenyika, tinotengesa zvigadzirwa kuEurope, Middle East, America, Latin America, North Africa, South Asia ……
Takumi brand iri kutora vatengesi vega pasirese.
Takumi brand iri kutora vatengesi vega pasirese. Mupepeti mumwechete chete ndiye anotorwa mudunhu rimwe. Zvigadzirwa zvedu ndezvemota uye zvemudhudhudhu zvikamu, zvinosanganisira mudhudhudhu spark plug, maindasitiri jenareta spark plug, firita, kuvesa coils, mvura pombi chisimbiso, kubereka, nezvimwewo .......
Injini chaiyo inoshanda inoda zvinotevera zvitatu mamiriro
Sinocare ine makore gumi neshanu zviitiko muBGM indasitiri kubvira payakavambwa muna 17, ndiyo hombe kambani yeBGM yekugadzira kambani muAsia uye yekutanga yakanyorwa muropa glucose mita inogadzira kambani muChina, ichitsaurira hunyanzvi hwehunyanzvi hwebiosensor, kuvandudza, kugadzira uye kushambadzira kukurumidza kuongororwa zvigadzirwa zvekuyedza.